म*हिना*वा*(रीका बेला यौ*न सम्बन्ध बनाउनुका सबैभन्दा ठूलो फाइदा – Khabaarpati
November 13, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on म*हिना*वा*(रीका बेला यौ*न सम्बन्ध बनाउनुका सबैभन्दा ठूलो फाइदा
साधारणतया कोही पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारीका बेला हुने रक्तश्राव तीनदेखि पाँचदिनसम्म रहन्छ । यसले कतिबेला निकै तनाव पनि दिने गर्छ विशेषगरी बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो म हिनावारीको र क्त श्रा वलाई प्राकृतिक रुपमा नै चाँडै समाप्त गर्न सकिन्छ । तर यहाँ जुन तरिकाबारे जानकारी दिइएको छ ती सुरक्षित त छन् तर यसले सबैलाई शत प्रतिशत असर पुर्याउँछ भन्ने छैन । यद्यपी, इमर्जेन्सीका बेला यी तरिका अपनाउन के समस्या ?
से क्स गर्नुहोस्ःहो तपाईंले सही पढ्नुभयो । एक स्वस्थ शरिर तपाईंको शरिरका लागि मात्र राम्रो नभई यसले तपाईंको महिनावारीको रक्तश्राव पनि चाँडै नै रोक्छ । यतिमात्र होइन । तपाईंलाई महिनावारीका बेला अत्यधिक पेट दुख्छ भनेपनि यसले सहयोग गर्नेछ । सेक्सको क्रममा तपाईंको गर्भाशयमा केही संकुचन हुने गर्छ । विशेषगरी तपाईं चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला यस्तो हुन्छ । यी संकुचनका कारण रगत एक झट्कामा शरिरबाट बाहिर निस्कन्छ । र तपाईंको महिनावारी चाँडै नै समाप्त हुन्छ ।
लगातार व्यायाम गर्नुहोस्ःतपाईंलाई व्यायाम गर्न जति नै मन नलागेपनि यदि तपाईं आफ्नो महिनावारीको रक्तश्राव चाँडै रोकियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईंले थोरै मेहनत त गर्नैपर्छ । यदि तपाईं दैनिक व्यायाम गर्नुहुन्छ भने यसको असर तपाईंको महिनावारीको साइकलमा पनि पर्छ । तपाईंको रक्तश्राव निकै हल्का हुन्छ, धेरै समयसम्म रक्तश्राव भइराख्दैन । साथै, महिनावरीका बेला पेट दुखाई पनि कम हुन्छ ।
भिटामिन सी सेवन गर्नुहोस्ःयदि तपाईं सही मात्रामा भिटामिन सी खाइरहनुहुन्छ भने यसले तपाईंको शरिरमा प्रोजेस्टेरोनको मात्रा कम गराइदिन्छ । प्रोजेस्टेरोन एक प्रकारको हर्मोन हो जुन तपाईंको गर्भाशयमा हुन्छ । भिटामिन सीका कारण गर्भाशयको आन्तरिक सतह चाँडै नै टुट्ने गर्छ । यो महिनावारीको रगतको हिस्सा हो । जति चाँडै यो सतह शरिरबाट निस्कन्छ त्यति नै चाँडै महिनावरीको रक्तश्राव समाप्त हुन्छ । यसका लागि अत्यधिक पानी पिउन आवश्यक हुन्छ । साथै, भिटामिन सी अत्यधिक मात्रामा लिनुअघि डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् । सुन्तला, कागती इत्यादिमा भिटामिन सी अत्यधिक पाइन्छ ।
हरियो सागसब्जी खानुहोस्ःयसको पछाडि एउटा थ्योरी छ । एक अनुसन्धानका अनुसार जो महिला शुद्ध शाकाहारी हुन्छन् उनीहरुको महिनावारी छोटो हुन्छ । त्यस्ता महिलामा आइरनको कमी हुने भएकाले यस्तो हुन्छ । चाहे जे सुकै होस् हरियो सब्जी खाँदा कुनै नोक्सानी भने हुँदैन ।
८४ वर्षे ‘हट हजुरबा’, जो अझै युवतीसँगै र्‍याम्पमा हिँड्छन् (तस्विर सहित)
विदेशबाट सामान ल्याउँदा नेपालीहरुले भन्सार नतिरी ल्याउन मिल्ने भयो यस्ता सामान।यस्तो आयो नया नियम।
भाडाको विमानको लास्ट सिटमा प्रधानमन्त्री ओलीको पोखरा यात्रा March 2, 2021
बच्चा जन्मेर खुसि मनाइरहेका बेला के भयो विराटलाई ? March 2, 2021
कमाउन गएको छोरो बक्सामा फर्कियो : अमेरिका सेनामा कार्यरत एक गोर्खालिको मृत्यु ! March 2, 2021
कति दिन लुकेर भाग्छौ सपना, बिनयलाइ जेल पठाएर तिमि चोखो भयौ भन्दै च्यालेन्ज गरिन शर्मिलाले सपनालाई (भीडीयो सहित) March 1, 2021
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन १८ गते मंगलबार,तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल March 1, 2021